Ahịa Ahịa: Mee Ka Ọ Bụrụ Onwe | Martech Zone
Ahịa Ahịa: Mee Ya Onwe Gị
Hipcricket si Nyocha 2014 n'ịntanetị, Àgwà Ndị Ahịa na Ahịa Ahịa, emere na Eprel 2014 ma lekwasịrị ndị okenye 1,202 na US. Nnyocha ahụ chọpụtara na ndị na-ere ahịa na-enwetara ndị na-agagharị agagharị na ndị na-azụ ahịa na-azaghachi. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị zaghachiri kwuru na ha natara ozi ederede site na ika na ọnwa 6 gara aga na ihe fọrọ nke nta ka ọkara nke ndị ahịa hụrụ na ozi ederede bara uru.
Agbanyeghị, ndị ahịa anaghị enweta akara ahụ ma a bịa n'iziga ozi dị mkpa, nke ahaziri iche, nke na-ewute ndị ahịa:
52% kwuru na ozi ahụ chere intrusive ma ọ bụ spammy.
46% kwuru na ozi ahụ abụghị metụtara ọdịmma ha.
33% kwuru na ozi ahụ enyeghị uru ọ bụla.
41% kwuru na ha ga-eso ndị ọzọ kerịta ozi ma ọ bụrụ na ha nwere obi mkpa ma ọ bụ Kupọns.
Enwere ohere dị ukwuu maka uto maka ụdị iji wee nwee njikọ bara uru ma na-adịgide adịgide na ndị ahịa ha. Nnyocha a na-egosi na ndị na-azụ ahịa na-arụsi ọrụ ike site na ahịa mkpanaka, nke na-agba ume. Ma, ụdị ga-eweta mkpọsa dị mkpa na nke ahaziri iche ma ọ bụ na ha ga-atụfu òkè na-eto eto nke ahịa. Doug Stovall, Ọgba ọsọ Igba
Tags: mgbapumgbasa ozi mgbasa oziKupọns ekwentịahịa efusms KupọnsSMS amụọsms oziSMS na-enyeklọb ederedeederede ederedeozi ederede
ISEBOX: Mbipụta na Nkesa Ọdịnaya vidiyo
Ọ bụ Smartphone Revolution! Ị dịla njikere?